Realme X50 Pro 5G Ongororo - Yakakosha-Inodiwa Kukosha Flagship Smartphone ye2020 - WebSetNet
Realme X50 Pro 5G Ongororo - Iyo Yakawanda-Inodiwa Kukosha Flagship Smartphone ye2020
Musika we smartphone watora nzira dzakawanda zvisingatarisirwi muna 2020 - uye izvo pasina kupinda mune yega yeRipidigital yazvino-irikuitika munyika yose COVID-19 dambudziko. Tawona kuvuya kwa Qualcomm Snapdragon 865 uye Kugamuchirwa kwe5G drive mureza wepamhepo mitengo yematenga-yakakwira, nezvakanyanya kuwedzerwa paiyo OnePlus mutserendende kuenderera nechimiro chemutengo chiri kuwedzera chinowedzera kutanga. Pamusoro peizvozvo, takaona runyerekupe rwekuti Google Pixel 5 inogona kunge iri yekutanga mukambani mutsara kune kwete ratidza iyo ichangoburwa mureza chipset kubva Qualcomm.
Iyo yakakwira mutengo wepuremende mafoni muna 2020 uye inovenga kushandisa Snapdragon 865 inogona kuuya nekuda kwemutengo wakawedzera neQualcomm, sezvo Snapdragon 865 iri 5G yakagadzirira chipset. Nekuda kweizvozvo, kune mashoma kwazvo bhajeti-inotungamirwa mureza mafoni kumusika. The Realme X50 Pro 5G chimwe chishandiso chakadaro, kunyangwe chiri chakaomarara kutarisa pasi. Ndakave nemafaro ekuchishandisa kwemwedzi yapfuura, asi nyaya neruoko rwangu rwaireva kuti ini ndaida kutsiva uye kudzokorora uku kwakapedzisira kunonoka. Akangwara zvese zvandakawana mumaoko angu nechishandiso chakaramba chakafanana, nezvimwe zvinowedzera kutowedzera.
Realme X50 Pro 5G XDA Foramu
Nezve ongororo iyi: Ndakagamuchira iyo Realme X50 Pro 5G muRust Red munaNdira 2020, kunyange ndakamirira kuti ndigamuchire imwe unit sezvo yangu yekutanga yaive nematambudziko. Realme haina kana chekubatika pane zvemukati wongororo iyi.
Realme X50 Pro 5G Yakanangana
Realme X50 Pro 5G Mhedziso yedhisheni
CPU: 7nm EUV, Octa-musimboti, Kusvikira 2.84GHz
AIE: yechishanu General Qualcomm AI Injini
Kuchengeta & RAM
RAM: 6GB / 8GB / 12GB LPDDR5 Quad-chiteshi
ROM: 128GB / 256GB UFS 3.0 + Turbo nyora + HPB
90Hz Ultra Smooth Ratidza
16.4cm (6.44 ”) Fullscreen
Kugadzirisa: 2400 × 1080 FHD +
Screen-to-body zviyero :: 92%
Corning Gorira Glass 5
Kuchaja & Bhatiri
65W SuperDart Kurisa
Inosanganisira charger ye10V / 6.5A & tambo
USB Type-C doko
kamera Akamera makamera
64MP Ultra yakakwirira-gadziriso yakakura-kona kamera
26mm, FOV 78.6 °, f / 1.8, 6P lens
8MP Ultra wide-angle & macro kamera
15.7mm, FOV 119 °, f / 2.3, 5P lens, 3cm inotarisa
54.08mm, f / 2.5, 5P lens
2MP B & W Portrait Kamera
FOV 88.8 °, f / 2.4
Portrait Kuparadzanisa Correction, Hyper Zvinyorwa, Ultra 64MP Mode, Ultra NightScape, Super NightScape, Panoramic maonero, Nyanzvi maitiro, Timelfall, Portrait mode, HDR, Ultra wide mode, Ultra macro mode, AI nzvimbo inozivikanwa, AI Runako, Firita, Chroma Boost, Slow Motion, Bokeh Mhedzisiro Inodzora.
Tsigira UIS Vhidhiyo Kugadzikana
Tsigira UIS Max Vhidhiyo Kusimbisa
Tsigira Ultra Wide-angle Vhidhiyo
Tsigira Chairo-nguva Bokeh Mhedzisiro Vhidhiyo
Tsigira 4K / 30fps kurekodha vhidhiyo
Tsigira 1080P / 30fps, 60fps kurekodha vhidhiyo
Tsigira 720P / 30fps, 60fps kurekodha vhidhiyo
Dual In-kuratidza Selfie kamera
Sony 32MP yakakura-pakona kamera
FOV 80.4 °, f / 2.5, 5P lens
8MP Ultra-yakafara-pakona kamera
FOV 105 °, f / 2.2, 5P lens
Portrait Mode, Timelapse, Panoramic maonero, AI Runako, HDR, Kutarisana-Kuzivikanwa, Firita, Portrait NightScape, Bokeh Mhedzisiro Inodzora
Tsigira Slomo Selfie
Tsigira 1080P / 30fps kurekodha vhidhiyo
Tsigira 720P / 30fps kurekodha vhidhiyo
Cellular & Wireless 5G Network
UK, France, Italy, Spain, Australia, Taiwan, Thailand, Malaysia, Singapore, United Arab Emirates, Saudi Arabia
NSA: n78/n41 (2515-2675MHz)/n79
SA: n78/n41 (2515-2675MHz)/n79
802.11 a / b / g / n / ac / ax
Wi-Fi 6 inotsigirwa
MAKARALI USB 5.1
GPS / AGPS / Girazi / Beidou
Yakawedzera mic kurira kudzvinyirira
Kukura & Kurema
Magnetic induction inzwa
Kubva paAndrew 10
65W SuperDart Chaja
SIM Kadhi Turu
Yakakosha Info Booklet ne Warranty Kadhi
Realme X50 Pro 5G Dhizaini
Iyo Realme X50 Pro 5G inoratidzira yakajairika dhizaini yemahara - iyo bezel-shoma kuratidza, yakatemerwa girazi kumashure, isina musoro jack ... ndeye 2020 smartphone kuburikidza uye kuburikidza. Kusarudzika kwayo kuripo pakatarisana nekamuri kamera, mbiri-kamera yekumisikidzwa iyo inoguma nekureba-kupfuura-kujairika kutemwa-kuruboshwe kuruboshwe kuruboshwe. Zvinotora vamwe kujaira, asi hazvinyatso kukanganisa mishandisirwo emushini. Iyo yakadzama foni uye ine huremu hwakawanda mukati mayo zvakare - ese ari maviri ari nekuda kwefoni 5G kugona. Mafoni e5G akajairwa kuenzana, sezvo zvichida bhatiri hombe uye antennae zvakanyanya kuti igamuchire. Iyo inopinda mu 205 magiramu, nehuremu hwakawanda hwakatarisana nechikamu chepasi.
Iyo Realme X50 Pro 5G ine mutauri mumwechete wepasi-kupfura pasi pasi, padivi nemutauri akatarisana nechekumusoro kwechiratidziro icho chinoshanda zvakare semutauri wekufona. Yedu unit Rust Red inosiyana, kunyangwe paine Moss Green imwe zvakare. Iro girazi rakasvinwa kumusana, asi pasina wekuchaja waya. Mune mamwe mazwi, chenjera kuti urege kukanda pasi sezvo kumashure iko kungosemesa sepamberi. Makamera ari kumashure achizvitenderedza kubva pachavo kubva kune mumwe kune mumwe kune rimwe divi, uye mukuwirirana neiyo kamera sensor kuwedzera pasi muviri wefoni chiratidzo che "realme".
Realme X50 Pro 5G Ratidza
Iyo inoratidzwa paRealme X50 Pro 5G ndeimwe yayo yepakati yekutengesa mapipi. A 1080p 90Hz Super AMOLED pani pa 20: 9 ficha chiyero inoita kuti chishandiso ichi chigadzikane chinopesana chakanakira zvakanakisa. Chokwadi iyo OPPO Tsvaga X2 Pro, Samsung Galaxy S20 yakatevedzana, uye iyo OnePlus 8 mutambo wenhabvu 120Hz mapanera, asi mutsauko kubva pa 90Hz kusvika ku 120Hz wakaderera zvakadarikidza kupfuura kusvetuka kubva pa60Hz kusvika 90Hz. Izvo zvichiri kuonekera, asi iyo fluidity ye 90Hz ndeyechokwadi ine tsika yekufunga kana uchifunga kuti uri kushandisa zvishoma. Kuti uise iyo maonero - iyo nguva iri pakati pechinhu chimwe nechimwe pane 90Hz skrini ndeye 11.1ms. Pane inoratidza 120Hz, iri 8.3 ms. Iine 60Hz kuratidzwa, nguva iri pakati pechinhu chimwe nechimwe ndeye 16.67 ms. Iko kune hukuru hwakanyanya kudzikira kudzoka nemafiramu akawandisa aunosundira pane show, uye panouya poindi apo zvingave zvakakosha kushandisa zvakaderera pane musiyano usingakoshi mukuzorodza mwero.
Kunze kweizvozvo, iyo Realme X50 Pro 5G ine yakanaka yakajairirwa. Iyo skrini inouya ne6.44-inches, uye sezvatotaurwa, izere HD mukugadzirisa. Iyo 100% DCI-P3 inoenderana, kunyange pasina rutsigiro rweHDRR kana kududzirwa kwemukati kusvika pa 90FPS (kusiyana nemamiriro eOPPO Tsvaga X2 Pro kana iyo OnePlus 8 Pro). Iyo inogona kusvika kusvika ku1000 nits mukupenya uye inotaridzika zvakanaka kunze - kunyangwe kana iri zuva. Pane pre-yakamisirwa screen protector zvakare, uye zvechokwadi haisi iyo yakaipa yandaona. Ndakaisiya pamudziyo wangu.
Changu chekutsoropodza chekuratidzira ndechekuti kamera yakatemwa-kunze inogona kutsamwisa kana uchitamba mitambo. Muchiitiko cheOnePlus 8 Pro kana iyo OPPO Tsvaga X2 Pro, diki yekucheka kamera iri nyore kutenderera pamusoro pegunwe rako kana uchitamba mitambo. Nekuda kwehukuru hweiyo Realme X50 Pro's cutout, zvisinei, ndakawana ichikanganisa nekubata kwekubata pane dzimwe nguva. Iyo zvakare inonyanya kuoneka paunenge uchidya yakazara-skrini yemukati. Iyo yakatemwa-kunze kamera inoita kuti chimiro chemahara chiwedzere kunge chakakura futi, asi chisina kukura zvakanyanya kupfuura zvandajairwa kuva ndichiuya kubva kune OnePlus 8 Pro uye iyo OPPO Tsvaga X2 Pro.
Realme X50 Pro 5G: Kuita
Iyo Realme X50 Pro 5G inorongedza iyo Qualcomm Snapdragon 865 uye yaive imwe yezvigadzirwa zvekutanga pamusika kuzviita. Iyo Qualcomm Snapdragon 865 ndiyo yazvino mureza chipset kubva kuQualcomm, uye nekudaro, yakanaka chaizvo pakuenderana neyakanakisa mashandiro aunowana pane chero Android smartphone parizvino. Qualcomm inotaura kuti iyo Snapdragon 865 inopa 25% yakakura kuita kupfuura iyo Snapdragon 855, kana 25% yakakura simba rekushandisa kana ichipa kuita kwakafanana neyaakatangira. Iyo Adreno 650 GPU inotevera maitiro akafanana - 20% nekukurumidza mifananidzo inopa kana 35% inoshanda yakajeka magiraidhi kana ichienzaniswa neAdreno 640. Iyo Realme X50 Pro 5G ndiyo mudziyo wekutanga wandakawana uchikwanisa kutevedzera mitambo ye GameCube ku padhuze kukwana - The Simpsons: Hit & Run, wehudiki unodakara wangu, akamhanya zvakanyanya kana zvishoma pasina chinorova. Sezvaunogona kutarisira, zvakaringana chero mumwe mutambo waunogona kukanda pachigadzirwa kubva kuGoogle Play Store inomhanya zvakakwana zvakare.
Geekbench 5 (Mahara, Google Play) →
Nekuti yakanaka yakapihwa iyo yazvino mureza chipset inonyatsobata zvakanakira Google Play Store inopa mumitambo, ini ndinowanzoedza kutevedzera pane. GameCube uye 3DS kuedzesera ndeimwe yeanogona kuita asi akawandisa ekushandisa-zviitiko panguva ino, paine mimwe mitambo yeWii inotakurika zvakare. Ndakafunga kupa mazita ekuenda kubva kune matatu ese masisitimu, uye kutaura kuti ndakafadzwa nemhedzisiro iyi ndeye understatement. Ndakaedza Kupfuura Mhuka Kuyambuka: Guta Folk (sezvandave ndiri pane izvo New Horizons geda senge munhu wese, munguva pfupi yapfuura), uye iyo zvakare yakamhanya isina kurova. Ini ndakapawo Mario Kart 7 kuyedza, iyo yakamhanya zvakaringana zvakare.
Iyo Realme X50 Pro 5G ndeye mureza neiyo yazvino Qualcomm mureza chipset, saka iwe unowana iyo pfungwa. Dai isina kumhanyisa zvinhu zvese zvinopihwa paGoogle Play Store, zvingadai zvakave dambudziko. Zvinoita, saka kutevedzera ndizvo chaizvo izvo zvatingayedze isu netariro yekuchiisa kuburikidza nenzvimbo dzayo, uye inobata yakawanda yakawanda yezvaunogona kukanda pairi.
Realme X50 Pro 5G: Tsika ROM uye Kubudirira
Realme yatora nzvimbo isina kujairika nenharaunda yekuvandudza tsika. Iyo kambani yakaburitsa kernel masosi eiyo Realme X50 Pro 5G uye iwe unogona kuvhura iyo bootloader kana uchida. Nekudaro, kusimudzira hakuna kuve kwakakurumbira kune yega yega Realme mudziyo. Iyo Realme XT iri kunyatsoita tsika yekuvandudza tsika, asi iyo Realme X2 Pro haisi kuita zvakanaka. Kwete izvozvo chete, asi kuvhura iyo bootloader pane izvo zvishandiso yaizodzikisawo sensor yemunwe futi. Parizvino, pane akati wandei mapundu iwe aunogona kusvetukira kuburikidza kuti uedze uye kutora iyo yeminwe sensor inoshanda, asi nzira yega yechokwadi yekuita izvi ndeyekuisa tsika ROM. Iyi nyaya imwechete ingangoshanda kune Realme X50 Pro 5G sezvazvinoita kune mamwe makambani mimwe michina, asi ini handina kukwanisa kuvhura uye kuyedza chokwadi. Chaizvoizvo teerera kune XDA maforamu eiyo Realme X50 Pro 5G kuve nechokwadi.
Realme X50 Pro 5G: Kuchaira kumhanya uye hupenyu hwebheti
Iyo Realme X50 Pro 5G inokorobha 65W kubhadharisa, senge iyo OPPO Tsvaga X2 Pro. Izvo zvatova zvakakwirira kupfuura zvakaringana chero mukwikwidzi, uye mudziyo unogona kuchaira kubva 0% kusvika 100% mumaminitsi makumi mana chete neanejaja charger. Kudzoka pandakashandisa chishandiso munaFebruary, ini ndakaona kuti kupenga kunokurumidza kumhanyisa mhanyisa kupfuura kwakagadzirirwa kune chero zvikanganiso zvebhatiri izvo zvingave ndauya nazvo. Zvinosuruvarisa, nekuda kwekuvharika kweiyo muIreland, ndatadza kusiya imba yangu kuenda zvakakodzera isa bhatiri kuburikidza nenzvimbo dzayo. Ini ndichadzokorora zvandakataura kare munaFebruary, zviri kuti ini ndakatenderera kwemaawa mana e-screen-on-nguva yekushandiswa kwezuva iro rine Snapchat, Facebook, Reddit, Twitter, Kurwisana, etc. Dambudziko riripo nderekuti ini ndakazodzidza software yandaishandisa zvinoshamisa kutanga kusunungurwa kusati kwasvika Software.
Kunyange zvichiratidzika kuti hupenyu hwangu hwebhatiri hwanga huri nani izvozvi, izvi zvinonyanya kutendwa nekushandisa kwangu kwemaWi-Fi nenyaya yekuti ndinogona kushandisa manyorerwo epamhepo pakomputa yangu, uye nekudaro, yangu yekushandisa-kesi yachinja mune izvi. nguva. Snapchat kazhinji ndiyo iri pamusoro penhamba dzebhatiri rangu izvozvi, uye ini handidi kushandisa Snapchat zvakanyanya. Ndichine chokwadi kuti chiripo vamwe Kuvandudza pano, hazvibviri kuenzanisa zvakananga kushandisa uye hupenyu hwangu hwebhatiri nenzira iyo iwewe muverengi, uye ini ndinogona kunzwisisa. Ini handikwanise kuzvienzanisa nemumwe mudziyo, sezvo ndisati ndambove nemashandisi ekushandisa seizvi, pandakakiyiwa mumba zuva rose. Izvo zvakaoma kuti ufunge kuti zvakanaka sei (kana zvakashata) hupenyu hwebhatiri, asi iyo yekumhanyisa mhanya yega inofanirwa kupedza zvakanyanya kunetseka.
Ndakaita kuyedza nePMMark's Work 2.0 Battery hupenyu bvunzo, kungoita pfungwa yakajairwa yekuti bhatiri richapera sei. Ini ndakaedza pane kupenya kuzere, uyezve zvakare pane yakanyanya kupenya inogoneka nemhepo ndege. Mhedzisiro yacho yakanga yakanaka kwazvo.
Kuenzanisa mamiriro ari pamusoro apa, mubairo weawa mashanu nemaminetsi makumi mana nemashanu zvinoreva kuti kureba kusingaoneki kwescreen panguva yaunofanira kuwana neReal X5 Pro 46G ndiyo inoratidzwa pamusoro. Iyo Yekushanda 50 bhatiri yehupenyu hwekuedza inoita kuti mudziyo uve wakamuka uye unogadzirisa data uchienderera, uye ne skrini pane yakanyanya uye chishandiso chiri kunze kwendege yemuchadenga, ndiyo nzira yepedyo yekutarisa real-world use.
Screenshots pamusoro, panguva iyoyo, ndeyezvetabirari yeiyo inogona kuwanikwa. Kuedza ikoko kwakaitwa pakaperera kupenya kunobvira, uye nemhepo ndege mode yakagoneswa. Pasi pemamiriro aya, unogona kuverenga kusvika kumaawa gumi nemaviri chiratidziro panguva. Izvi zvinotipa huwandu hwehupamhi uye hwepamusoro-skrini pane dzinokwanisika pane chinhu, uye zvese zviri zviviri zvine rupo zvakakwana.
Realme UI mukuenzanisa neColorOS 7
Realme UI yakavakirwa ColorOS 7, yakanyanya-yakavandudzwa ColorOS vhezheni iyo inogadzirisa akawanda ezvinyorwa zvandaimbova nazvo. Izvo zvakare hazvifanane neyakagadzirwa zvisina kunaka-yakagadzirwa iOS kara, asi panzvimbo pezvo, inogadzira iyo yayo kuzivikanwa neUI iri pedyo zvakanyanya neiyo stock Android. Realme UI yakanaka chaizvo yakafanana neColorOS 7, nekwakati shomana shanduko shanduko iyo ini yandinonyatsoda futi. Chibvumirano pakati pedu paXDA-Vagadziri ndechekuti ColorOS 6 inotyisa. ColorOS 7 inotarisa a ose zvakawanda padyo ne stock Android. Izvo zvinopedza neasina UI shanduko, inounza chaiyo inobatsira maficha, uye inoita iyo Realme X50 Pro inonakidza kushandisa. Realme UI yatova imwe yemhando dzandinoda dzematehwe eOEM paApple smartphone, zvinoreva nekuwedzera, ndizvo zvakaitawo ColorOS. Handichakwanisi kupfuura izvozvo.
ColorOS 7.1 Ongororo: OPPO yemazuva ano yeApple OS ndiyo yakanyanya kunaka
Zvisinei, pane vamwe misiyano. Hapana akakura kunyange, uye pakatarisa, haungatombovaona. Mumwe musiyano mukuru uyo ​​ini akaita chiziviso chaive chekuti pane kamwe-ruoko maitiro gesture pane iyo Realme X50 Pro 5G, chimwe chinhu chaizonyanya kufarirwa pane OPPO Tsvaga X2 Pro. Ndakaona zviri nyore kushandisa uye ndakabatanidza mune yangu yakajairika yekushandisa. Kazhinji ini ndinoregera nzira dzakabatana-imwe sezvo dzingave dzakaomesesa kunyange kupinda madziri, asi handizvo zvazviri pano.
RuvaraOS 7 vs Realme UI
Kuruboshwe: OPPO Tsvaga X2 Pro // Kurudyi: Realme X50 Pro 5G
Iyo Realme X50 Pro 5G inodakadza kamera inokanganisa, uye sezvandakambotaura, chero nyaya dzandaive nadzo neRealme X50 Pro 5G inogona kutotsanangurwa kure neyakajeka software yekutanga yandaishandisa kare. Hapachina kuita husiku maitiro anotaridzika akasvibira, ane ruzha mess semuenzaniso. Mifananidzo yakapenya uye ndeyechokwadi kuhupenyu, uye kamera application pachayo iri nyore kushandisa. Ngatitangei neiyo kamera UI, isati yapinda mune iyo chaiyo mifananidzo iyo inogadzira. Chimiro chakanaka chakajairika, uye zviri nyore kufamba. Iwe unogona kushambira pakati pezvakasiyana sarudzo, uine akasiyana parameter kumusoro.
Iyo iri pamusoro Flickr albhamu izere nemifananidzo yese yakatorwa neRorme X50 Pro 5G. Mamwe mafoto akanzwa akanyanya, nepo vamwe vakanzwa chokwadi kune hupenyu huine huwandu hwakawanda hweruzivo. Kana uchifunga nezve mutengo, iyo Realme X50 Pro 5G ine yakanaka kamera, iyo chete inoitwa kunyange iri nani kana uchifunga kuti inobhadhara zvishoma zvakaderera pane mukwikwidzi wakakodzera.
Husiku maitiro anoshanda akanaka kune rima mapikicha (kunyangwe usazviedze mudiki mutema), uye mamwe makamera anoramba achiwirirana zvakare neyekutanga sensor. Izvi zvinowanzove dambudziko pamidziyo inodhura, uko kugadzirwa kwekhamera pakati peakona-enguru lens uye yepakutanga sensors inosiyana kuitira kuti iwo mavara anopedzisira asingaenderani. Hazvisizvo pano, sezvo mapikicha pane ese sensors anoita kunge aine mashandiro akaenzana uye mamwe mavara mhedzisiro pane imwe neimwe.
Iyo Realme X50 Pro 5G ndiyo ingave iri chinhu chepedyo kune "muurayi wegwara" isu tichaiwana gore rino
Zvinosuruvarisa nekutanga kweQualcomm Snapdragon 865, nekuda kwemitengo, zvaizoonekwa se "muchengeti wemhondi" moniker haidzokere gore rino. Wataura izvozvo, iyo Realme X50 Pro 5G ndiyo inogona kunge yakanyanya bheji yako kuti iwe unosvika kure uye inogona kupedzisira yave iri iyo kwegore rose. Imwe chete mudziyo uri pamusika unogona kubatisisa murazvo kune Realme X50 Pro 5G ndiyo Nubia Red Magic 5G, kunyangwe iine huwandu hwenhau dzesoftware kubva pane zvandaona, zvakabatanidzwa nekamera yakaipisisa. Iyo Realme X50 Pro 5G ine kupenga nekukasira kubhadharisa, kamera huru, kushanda kwepamusoro, uye yakanaka yekuratidzira ine yakakura-kona kamera pamberi kumberi nekutora boka selfies neboka.
Unogona kutenga iyo 8GB RAM + 128GB yekuchengetedza Realme X50 Pro muMoss Green kana Rust Red muEurope ye € 599.90. Iyo 8GB RAM + 256GB yekuchengetera modhi inodhura € 669.90 nepo iyo 12GB RAM + 256GB yekuchengetedza modhi inodhura € 749.90. Panguva yekuparurwa, Realme parizvino anotumira runhare kuBelgium, France, Germany, Luxembourg, Netherlands, nePortugal. MuIndia, foni inotengesa yakaderera se₹, 39,999 yeiyo 6GB RAM + 128GB yemodhi yekuchengetedza uye inokwira kusvika ₹ 47,999 yeiyo yepamusoro-yekupedzisira 12GB RAM + 256GB yemuenzaniso.
Tenga iyo Realme X50 Pro: Europe ||| India
The post Realme X50 Pro 5G Ongororo - Iyo Yakawanda-Inodiwa Kukosha Flagship Smartphone ye2020 yakatanga kutanga xda-vatadzi.
Realme X2 Performance & Mitambo Yekuongorora: Iyo Yakanyanya Mid-Ranger ye 2019
Maoko-pane: Iyo Realme X50 Pro 5G ndeye 2020 yekutanga mureza muurayi
Realme X50 5G ine 120Hz mbiri mbiri hole-punch kuratidza, Snapdragon 765G, Realme UI inotanga muChina
Realme Android TV 43 ″ Ongororo: Kukwikwidza Kwakaoma kweMi TV
Realme 7 Pro ongororo: Yakakura yepakati-renji sarudzo
← Android Meseji Pane Desktop: Maitiro Ekutumira & Kugamuchira Kubva kuPC Yako Sonos Arc: Sonos inoenda yakangwara neyekutanga premium soundbar →